Nakhu intshumayelo ngashumayela a izinyanga umbhangqwana edlule kuMathewu 12:36. Ngiyakhuleka kungcono wesikhuthazo kuwe.
Words ibalulekile. Sisebenzisa amagama ukuxhumana nabangani nomndeni wethu. Sisebenzisa amagama ethu ukuba aqhube ibhizinisi. I sebenzisa amagama ukubeka izingoma ndawonye futhi akwazi ukuziphilisa. We use words...
One Sixteen Isiqophi
Ngesikhathi egubha umkhosi ukukhululwa encwadi yami, The Good Life, nanku official video for "Omunye Nesithupha,” kusuka ku-albhamu yami entsha, Abizwa nangokuthi ama The Good Life.
Sabheka ekusithekeni nge Trip Lee njengoba ukhuluma highs kanye kuvumela in inqubo yokwenza i-albhamu yakhe yakamuva “The Good Life.”
Nakhu ntshumayelo yamuva ngashumayela uJeremiya 31:33. Amaphuzu My main babeyizinkulungwane: I. UNkulunkulu Ingabe Ukusebenza Emhlabeni II. UNkulunkulu Ukusebenza Ngaphakathi III. UNkulunkulu Ukusebenza Interpersonally IV. UNkulunkulu At Work
I do umculo ukuze baziphilise. Futhi njengoba abaningi nani nazi, the kind of music I do is a little bit different than the songs you might hear at a CHBC...